भाइले दिदीको मोबाइल चलाउदा दिदीको ना*ङ्गो तस्विरहरु देखेपछि…. - H Khabar
भाइले दिदीको मोबाइल चलाउदा दिदीको ना*ङ्गो तस्विरहरु देखेपछि….
बझाङ ११ असाेज- बझाङमा आफ्नै भान्जी कर*णी गरेको अभियोगमा मामा प*क्राउ परेका छन् । मामाघरमा बस्दै आएकी भान्जीलाई केही वर्ष अघिदेखि नै मामाले पटक पटक यस्तो हर्क*त गर्दै आएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
उनीमाथि बिहीबार कर*णीमा मु*द्धा दर्ता गरी जिल्ला अदालतबाट म्याद थपसहित आवश्यक अनुसन्धान भैरहेको प्रहरीले बताएको छ । कक्षा ९ मा अध्यनरत बालिकामाथि ६३ वर्षका मामाले उनीमाथि पटक पटक यस्तो ह*र्कत गर्ने गरेको खुलासा भएपछि मु*द्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनले भान्जीको मोबाइलमा अ श्लि*ल तस्बिरसमेत खिचेको भेटिएको छ ।
बालिकाको भाइले आफ्नो दिदीको मोबाइल चलाउन खोज्दा नजानेपछि गाउँका १ छिमेकीलाई मोबाइल चलाउन सिकाइदिन आग्रह गर्दा मोबाइलमा अ श्लि*ल तस्बिर देखेपछि घट*ना बाहिरिएको हो । याे घटनामा धेरै मान्छे दुखी भएका छन् ।
विमानस्थलमा मन्त्री योगेश भट्टराईले ल्याएको नियम प्रचण्डले मानेनन्
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले विमानस्थलमा भिभिआइपीको नाममा गाडीभित्र छिराउने परम्परा रोक्ने घोषणा केहि समयमै यसको उल्लंघन भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट देशका अन्य ठाउँमा जहाजमा जाँदा देशका छ जना उच्चपदस्थ (भिभिआइपी)ले मात्र जहाजसम्मै गाडी सुविधा पाउने घोषणा भएपनि यो नियमको उल्लंघन भएको हो ।
शुक्रबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त नियम उल्लंघन गरेका हुन् । दोलखाको जिरी जान हेलिकप्टर चढ्न जाँदा प्रचण्डले गाडी हेलिप्याडसम्मै लिएका पुगेका थिए । प्रचण्डको गाडी हेलिकप्टरसम्मै गएको विषयमा विमानस्थल प्रमुख राजकुमार क्षेत्रीले हवाइ कम्पनीको गाडीमा जान पाइने भए पनि अरू गाडी लिन नपाइने बताए।
मन्त्री योगेश भट्टराईले विमानस्थलमा भिभिआइपीको नाममा गाडीभित्र छिराउने परम्परा रोक्ने घोषणा गरेका थिए। विमानस्थल कार्यालयले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका लागि अनुरोध आएमा गाडी लिन दिन सक्ने बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा जाने कसैले पनि गाडी लान पाउँदैनन्।
अमेरिका जान बैंक ब्यालेन्स देखाउनु भन्दै ६० लाख ठगेपछि…
यी ६ राशिका ब्याक्तीलाई हुदै छ फागुन ९ गते महाँशिवरात्रीका दिन महाँफलीफाप भने बाकीलाई ठिकै ! पढ्नुहोस राशिफल
१५ तस्बिरमा हेर्नुहोस् ‘फेयर एण्ड लभ्ली गर्ल’-यामी गौतम
भगवानले प्रार्थना सुनिदिएपछि पुछिन लागेको सिउँदो रोकियो, १४ वर्षपछि श्रीमान भेट्दा भावविह्वल
श्रीमानले म’लद्वा;र भित्र आगो को’चि’दिए पछि
ओलीको घरबाट बास्कोटाले भने: नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएँ
H Khabar Pvt. Ltd.